Soo dejisan NetInfo 8.9 – Vessoft
Internet, Network, Imtixaanka
Soo dejisan NetInfo
NetInfo – set ah software casri ah si ay u tijaabiso oo la shaqeeya shabakadda. Qalabka inay dalka baadhaan oo dhibaatooyin network, tijaabi hawlgalka iyo waddo in ciidanka, ka raadi magaca by IP-address, hubi isku halaynta cinwaanada emailka la heli karaa si user ah. NetInfo awood u si aad u eegto macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan xidhiidhka ka network iyo server kaas oo xiriir la sameeyo. Sidoo kale waxaa jira qalab si ay u siiyaan shaqada ugu wax soo saarka iyo amaan ee shabakadda. NetInfo ayaa interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
Tiro badan oo ah qalab network
Search dhibaatooyin network
Test of shabakadaha
Kormeerka ee awoodda shaqeeya ciidammada gaarka ah
Shaqada Secure shabakadda
NetInfo Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Hamachi 2.2.0.526
English, Français, Deutsch, Italiano... NetCut 2.1.4
العربية, English, Українська, Français... CPU-Z 1.77